७१ वर्षमा भारतले उल्ट्यायो इतिहास, अष्ट्रेलियामा पहिलोपटक जित्यो सिरिज – Everest Dainik
७१ वर्षमा भारतले उल्ट्यायो इतिहास, अष्ट्रेलियामा पहिलोपटक जित्यो सिरिज
सिड्नी । भारत र अष्ट्रेलियाबीच भएको चार खेलको सिरिज भारतले जितेको छ । भारतले ७१ वर्षको इतिहासमा अष्ट्रेलियामा पहिलोपटक टेष्ट सिरिज जितेको हो । भारतले २–१ ले सिरिज जितेको हो । अन्तिम खेल रद्द भएको थियो ।
यसअघि इङ्ल्याण्ड, दक्षिण अफ्रिका र न्यूजिल्याण्डका टीमले अष्ट्रेलियामा सिरिज जितिसकेका छन् । यसअघि वर्षाका कारण गावस्कर ट्रफीको चौथो र अन्तिम टेष्टको अन्तिम दिनको खेल रद्द भएको थियो । खराब मौसमका कारण चौथो दिन ६४÷४ ओभरको खेल रोकिएको थियो । उज्यालो नभएको भए तेश्रो दिन पनि १६।÷३ ओभर कम खेलिएको थियो ।
यो टेष्टमा भारतले टस जितेर ब्याटिङ फैसला लिएको थियो । भारतले सात विकेटमा ६२२ रन बनाएर आफ्नो पहिलो पारी सकेको थियो । अष्ट्रेलिया पहिलो पारी ३ सय रनमा नै अलआउट भएको थियो ।
भारतले फलोअन देखिएपनि दोश्रो पारीमा बिना विकेट ५ रन मात्रै बनाउन सक्यो । त्यही बेला पर्याप्त उज्यालो नहुँदा तेश्रो सत्रको खेल रद्द भएको थियो । चौथो दिन भने पानी परेपछि पहिलो सत्रका खेल हुन सकेनन । पाँचौ दिन पनि पानी परिरहेको थियो ।
ट्याग्स: Gwaskar trophy, INDIAN CRICKET TEAM
हिड्ने , हाँस्ने र जीबनमा केही गर्ने रहरको याचना ,सहयोगको अपेक्षा !( भिडियो सहित )
फागुन वा चैतमा पार्टीको महाधिवेशन हुनुपर्छः नेता पौडेल
पाकिस्तानले पायो ३३७ रनको लक्ष्य, विराटको नयाँ कीर्तिमान
भारत-पाकिस्तान क्रिकेट अपडेट: विराटको नयाँ रेकर्ड
विश्वकप क्रिकेटः पाकिस्तानविरुद्ध विराटको अर्धशतक पूरा
पाकिस्तानलाई दोस्रो सफलता, १४० रनमा आउट भए रोहित
भारत-पाकिस्तानबीच यस्तो छ क्रिकेट दुश्मनी!
विश्वकपः पाकिस्तानविरुद्ध रोहितको शानदार शतक
तीन क्षेत्रको सामाजिक विषयको नतिजा सार्वजनिक